प्रदेश नं. ६ का मुख्यमन्त्री शाहीलाई दुई तिहाई बहुमत – Vision Khabar
प्रदेश नं. ६ का मुख्यमन्त्री शाहीलाई दुई तिहाई बहुमत
। १६ फाल्गुन २०७४, बुधबार ०८:१० मा प्रकाशित
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले मंगलबार विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । सविधानको धारा १६८ को उपधारा ४ बमोजिम मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने प्रावधान छ ।
उक्त प्रावधान अनुसार प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशन अन्तरगत मंगलवार बसेकोे पाँचौँ बैठकमा शाहीले विश्वासको मत दिन प्रस्ताव पेश गरेका थिए । सो प्रस्तावको समर्थन गर्दै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका ३२ सांसदले उनको पक्षमा मत दिएका थिए । तर, नेपाली कांग्रेसका ५ सांसद र राप्रपाकी एक सांसदले विपक्षमा मत व्यक्त गरेका थिए । संसदमा उनले मत माग्दै प्रदेशको समृद्धिका लागि एक हुनुपर्ने भन्दै मत मागेका थिए । सरकार गठन हुदाँ सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष भए पनि प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि एक हुनुपर्ने बताए ।
उनले भने,‘परम्परागत सोच चिन्तन छ, यसलाई सकारात्मक सोच बनाउनु पर्छ ।’ फेरि थपे,‘अन्य प्रदेशलाई सभ्य समाज बनाउन सभ्यताको पहिचान यो प्रदेशबाट दिनुपर्छ ।’ जनाताको आशा अपेक्षा जो छ, त्यो पुरा गर्न सहकार्य र एकता वद्ध भएर अघि बढ्न आवश्यक औँल्याए । अहिलेको आवश्यकता पक्ष र विपक्ष नभएर एक हुन आग्रह गरे ।
नेकपा एमालेको तर्फबाट सांसद यामलाल कंडेलले प्रदेश समृद्धिका लागि उक्त प्रस्तावमा अडिक रहेको बताउँदै समर्थन जनाए । सरकारमा नरहेको दलले पनि सकारात्मक भुमिका खेलेको भन्दै प्रदेश समृद्धिका लागि सकारात्मक भएको बताए । सांसदले विश्वास गर्ने गरी जनताले विश्वास गर्ने प्रदेशको हितमा काम गरी अगाडि बढ्न समेत आग्रह गरे । जसरी जनताले वामगठबन्धनलाई विश्वास गरेको छ भन्दै जनताको चाहाना र आवश्यकतालाई ख्याल गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
त्यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद सीताकुमारी नेपालीले प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि उचित स्याहार सु–सार गर्नुेपर्ने भन्दै जनताको स्तर उकास्न सम्पूर्ण सांसद एकता हुनुपर्ने बताउँदै समर्थन जनाईन् । अवको बाटो भनेको समाजबाद उन्मुख हुने बताईन् । जनताको जनस्तर माथि उठाउनकै लागि जनता विच संकल्प र प्रतिवद्धता गरेर आएको र सोही अनुसार सरकारले योजना र कार्यक्रम बनाउनु पर्नेमा जोड दिईन् ।
प्रदेशको विकासका लागि ठोस योजना निर्माण गर्न जरुरी रहेको भन्दै मुख्यमन्त्रीको पक्षमा मत जाहेर गर्न समेत सवै सांसदलाई आग्रह गरिन् ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवनबहादुर शाहीले कांगेस प्रतिपक्ष भुमिकामा रहेपनि सकारात्मक भुमिका निर्वाह गर्ने बताए । प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि आफूहरु प्रतिपक्षको रुपमा नहोमिने भन्दै सरकारले खेलेको भुमिकामा समर्थन गर्ने या विपक्षमा रहने बताए ।